Shiinaha QUILT COVER Soo saare iyo Badeecad | Dabayl dabiici ah
magaca sheyga Daboolka dharka
Dhar dibedda ah hoos dhar caddayn
Cabir hal, labalaab, boqorad, boqor, cashada boqorka ama cabbirka la habeeyay
MOQ 200 kumbiyuutarada
Isticmaalka Huteelka Guriga
Xirxirida Shuruudaha iibsadaha
1.Dhaqdhaqaaqa wuxuu leeyahay marin hawo sare, duleelin xoog leh, maaddada hoose ee sare, wuxuuna leeyahay astaamaha fudeydka, jilicsanaanta iyo jilicsanaanta. Joodar isku mug ah, miisaanka saafiga ah ee duvetku wuu fudud yahay, qiyaastii 1/3 oo ah xarka xariirta iyo 1/2 ee dharka dhogorta.
2. Duvetku wuxuu leeyahay marin hawo raaxo leh, hanti ka saarida qoyaanka oo xoog leh, ma agglomerate, oo wuxuu leeyahay astaamo aad u fiican oo nuugista qoyaanka iyo qiiqa oo aysan lahayn qalab kale oo qabow iyo diirran. Waxaa loo yaqaan "furaash neefsashada".
3. Duvetku waa mid adag oo waara. Guud ahaan, duvet ayaa loo isticmaali karaa muddo tobanaan sano ah. Codsiga caadiga ah, haddii aad fiiro gaar ah u yeelatid inaan lagaa jarin walxaha fiiqan, uma baahnid inaad si toos ah ugu soo baxdo qorraxda, waadna ilaalin kartaa astaamaha jaakadaha hoos u dhigaya adoo dhigaya meel dabiici ah oo hawo leh si aad u qalasho.
4 Faa'iidooyinka Dahabka Down
1. Duvet wuxuu leeyahay astaamaha ilaalinta diirimaadka sare, dabacsanaan xoog leh, dabacsanaan sare, miisaan fudud, jilicsanaan iyo wixii la mid ah. Qiyaasta isku midka ah, duvet waa kan ugu fudud, qiyaastii 1/3 gogol, 1/2 dhogor dhogor ah.
2. Duvetku wuxuu leeyahay hawo hawo wanaagsan iyo qallayl, qoyaan badan, ma ahan mid adag. Waxay leedahay qalab kale oo dahaadh ah oo aan heysan hiddo-wadayaal wanaagsan iyo kala-geddisnaan.
3. Duvets waa waara. Duvet badanaa wuxuu socon karaa in ka badan 30 sano. Markaad isticmaasho waqtiyada caadiga ah, illaa intaad fiiro gaar ah u leedahay inaadan ku jarin barta fiiqan, si toos ah ha isugu bandhigin qorraxda, oo si joogto ah ugu qalaji meel hawo leh si aad u ilaaliso waxqabadka soo ifbaxa.
4. Duvet wuxuu ku habboon yahay ka hortagga dhiig-karka, rheumatism iyo arthritis. Muraayaddu waa tan ugu jilicsan dhammaan waxyaabaha sariirta oo bukaanku wuu isticmaali karaa walaac la'aan. Waxay sidoo kale noqon kartaa mid qoyaan leh, si jidhku u soo saaro biyaha, si jidhku u qallalo, oo aan u xanuunsanayn laabotooyinka, arthritis.
Hore: HOTEL RAAXADA MICROFIBER DUVET
Xiga: 2021 qiimaha jumlada Shiinaha Custom daabacaadda Logo Bath towels 100% Cotton Luxury Hotel Tuwaalka
tuwaalka qubeyska, tuwaalka wajiga, Shukumaan cudbi ah, tuwaalka qubeyska la dhigo, Tuwaalo midab leh, daboolka dharka,